Global Voices teny Malagasy · 12 Novambra 2016
12 Novambra 2016
Tantara tamin'ny 12 Novambra 2016
Matory na Maty – Ampahany 1: “Toa Mihiaka Fahafatesana ny Zavatra Rehetra”
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 12 Novambra 2016
"Nandalo ny vatako ny herinaratra. Herinaratra ampy hamatsiana ny mpiray vodirindrina amiko manontolo no nandalo ny vatako. Ny vatako nitafy tapaka nitsirara eo amin'ny gorodona dia tena mpampita herinaratra tsara mihitsy."
Notànana Vonjimaika Ny Mpanao Lahatsary Iray Ao Frantsa, Misongadina ny Fomba Hafahafa Ampiasan'i Frantsa Ny Fahamehana
Frantsa 12 Novambra 2016
Voahelingelina amin'ny asany amin'ny tsy fahazoana miditra ao Calais intsony ny mpanorina ny tranonkala Taranis News, tranonkala miompana manokana amin'ny lahatsary mivoaka avy amin'ireo fihetsiketseham-panoherana misy ao Frantsa.
Mbola An'arivony No Tsy Manan-kialofana Ireo Tra-boinan'i Haiyan Telo Taona Taty Aoriana
Azia Atsinanana 12 Novambra 2016
Nomena dikany vaovao ny vonjy taitra. Lasa nampiandrasana sy nangataka hiavotan-tenany mihitsy aza ireo sisa velona raha tokony hahazo fanampiana haingana.
Manohy Misambotra Ireo Mpanao Politika Kiorda i Tiorka, Ary Mametra Ny Fampiasana Aterineto
"Ny zavatra vita androany hariva dia tsy fanonganam-panjakana ihany fa hetsika hampisaraka ny firenena ihany koa!"
Ny Kandidàn'i Etiopia Hitarika Ny Fikambanana Iraisam-pirenena Misahana ny Fahasalamana Tratry ny Aretin’ny Tsy Fitandremana
Afrika Mainty 12 Novambra 2016
Nanafintohina mpanaramaso maro tamin'izy nanehoany tsy fahampiana fahalalàna momba ny paikady iraisam-pirenena momba ny fahasalamana nandritra ny vovonana iray ho fanehoankevitra ny kandidan'i Etiopia ho Tale-Jeneralin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Misahana ny Fahasalamana (OMS), Tedros Adhanom.
Matory na Maty – Fizaràna faha-2: “Ny Palitao Mangan'i Aghyad”
"Nosintoniny ny rojo mandra-pihantonay tamin'ny tananay, zara raha mikasika ny tany ny rantsan-tongotra. Mihevaheva eo anelanelan'ny tany sy ny lanitra ianareo, aseho toa sorona ho alatsa-drà."